प्रवास – Page3– shubhabihani
Home / प्रवास (page 3)	प्रवास	भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले मुद्दा हारे, पेन्सनमा भेदभाव नभएको युरोपेली अदालतको ठहर
423 Views ३० भदौ, काठमाडौं । युरोपेली मानवअधिकार अदालतले ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई पेन्सनको मामिलामा ब्रिटिस सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर गरेको छ ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्दै फ्रान्सको स्ट्रायजवर्गमा रहेको अदालतमा झण्डै पाँच वर्ष पहिले मुद्दा हालेका थिए । तर, अदालतले उनीहरुको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
युरोपेली मानवअधिकारसम्वन्धी माहासन्धिको धारा ११ र धारा १ अनुरुप भूवपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार नभेटिएको अदालतले बताएको छ । धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकहरुले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले भने ब्रिगेड अफ गुर्खाजबाट सेवानिवृत्त अन्य सैनिकहरुको तुलनामा आफूहरुलाई पेन्सनमा भेदभाव भएको दाबी गरेका थिए । १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले समकक्षीहरुको तुलनामा झण्डै एक तिहाइ मात्र पेन्सन पाउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
यस्तै मुद्दामा ब्रिटेनकै उच्च अदालतले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई हराएको थियो ।
अब युरोपेली मानअधिकार अदालतले पनि विपक्षमा फैसला गरेपछि भूतपूर्व गौर्खा सैनिकहरु निराश बनेका छन् । र, नेपाल सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।
282 Views काठमाडौं: ‘अमेरिका जान भनेर काठमाडौं हुँदै दिल्लीबाट भेनेजुयलाको भिसा हानेर पठायो, भेनेजुयलाबाट मेक्सिको जाने क्रममा त्यहाँको एयरपोर्टमा हामीलाई समातेर शरणार्थी शिविर पठाए, बल्लतल्ल छुट्यौं, केहीलाई दलालले कोठामा थुनेर राखेको छ, हामीलाई बचाउनुपर्‌यो’, ग्वाटेमालाबाट टेलिफोनमा पीडा पोख्दै थिए कृष्ण न्यौपाने ।
दलालले अमेरिका पुर्‌याउने तीनवटा रुटबारे अपराध महाशाखाले सूचना सार्वजनिक गरेपछि आफूले पढेर जानकारी पाएको न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘मिडियामा पनि आएछ, हामी धेरै जना अलपत्र परेका छौं, सरकारले चाह्यो भने उद्धार गर्न सक्छ ।’ न्यौपानेका अनुसार एमाले नेता उत्तरकुमार ओलीका आफन्त समेत अमेरिका जाने क्रममा मेक्सिकोमै अलपत्र परेका छन् । नेता ओलीले भने आफ्ना आफन्त अमेरिका पुगिसकेको जानकारी दिए ।
मेक्सिकोमा अलपत्र नेपाली युवाबारे महाशाखालाई जानकारी भएको उल्लेख गर्दै खनालले त्यसका दलालहरूको खोजी भइरहेको बताए ।
युएई बाट अनिश तामांग को नविना लाइ च्यालेन्ज सक्छौ भने जेल हालेर देखाउ
4,785 Views २६ भदौ युएई । नविना लामा तिमी साँच्चैको बहादुर चेली रहेछौं । सबै भन्दा पहिलो मुद्दा मेरो नाममा लगाउ.. मैले किन विरोध गरे नविना लामाको? आफ्नो जातियता, धर्म संस्कृतिको विपक्षमा उभिएको भनेर विरोध गर्दा साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने धम्कि दिने नविना लामा ! सक्छौ मुद्दा हालेर देखाउ। जातिय उत्पिडन मुक्तिको लागि फासी चढ्न तयार छु सक्छौ जेल हालेर देखाउ ? यो दुबईबाट अनिस तामाङ्गले सामाजिक संजालमार्फत नविना लामालाई दिएको चुनौती हो ।उनले आफुलाई जेल हाल्ने चुनौती दिंदै आफ्ना भनाइ राखेका छन् उनको भनाइ जस्ताको तस्तै निम्न छन्
१. गणतन्त्रको लागि जनताको छोराछोरीहरु सडकमा जिवन मृत्युको लडाइँ गर्दै गर्दा केपी ओलीले वयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर भन्दै गर्दा नविना लामा मौन बस्यौ ! कुन चाँही सभामा गणतन्त्र विरोधी ओलीलाई विरोध गर्यो ।
२. जनजातिहरुलाई बाँदर मधेशिलाई विहारीको संज्ञा दिदै गर्दा नविना लामाले कहाँ निर विरोध गरिन केपी ओलीको।
३.पहिलो संविधानसभामा माओवादीले जनजातिको पक्षमा उभिदा एमालेहरु जनजातिहरुको मुद्दाको विपक्षमा उभियो। एमालेकै कारण संविधानसभा विघटन भयो। यस्तो जटिल अवस्था सिर्जना भए पछि एमालेको जनजाति नेताहरुले एमाले पार्टी जनजाति विरोध पार्टी हुन भनेर पार्टी परित्याग गर्दा नविनाले के बोलिन यस विषयमा ।
४. देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री हुदा केपी ओलीले उत्पिडित जातिले दिएको बलिदानको बहाक प्राप्त हुन लागेको संघीयतालाई बाख्राको टाउकोमा भैसिको सिंङ भन्दै गर्दा कहाँ विरोध गर्यो नविना? किन मौन बस्यौ ?
५. पछिल्लो चरण केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदा बौद्ध धर्मको आस्था माथि कडा कडा शब्द प्रहार गर्दै बुद्ध धर्मको प्रतिक खादालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा खादा प्लास्टिक जस्तो चिज यसको प्रयोग गर्नु वातावरणको दुषित हो, यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको छ, अनि खादाले हाम्रो हिन्दु धर्मको फूल ओजेल पारेको छ यसलाई निषेध नै गर्नु पर्छ भनेर अविव्यक्ति दिएको ५-६ महिना हुदानि नविना लामा किन मौनता जनायो?
६ .यसरि आफ्नो पार्टी एमालेको सरकारले खुलेर बुद्ध धर्मको प्रतिक खादालाई घोषित रुपमा प्रतिबन्ध गरेर ढाकाको गलबन्दि लगाउदै गर्दा नविना लामा नि त्योही गलबन्धि बेरेर कम्मर भाँचीभाँची हर्षउल्लास मान्दै गर्दा म जस्तो एक सच्चा जनजातिको छोराले विरोध किन नगर्ने? उसले त्यो कार्यक्रममा ढाकाको गलबन्धि लगाएकोमा विरोध हैन हाम्रो । उत्पिडितजातिको धर्म संस्कृति माथि खुल्ला प्रहार गर्दै शासकहरु जितको विजयजुलुस गर्दै गर्दा नविना लामा त्योही भिडमा रमाएको हाम्रो आवाजलाई खिल्लि उडाउदै गर्दा हामीले किन विरोध नगर्ने उसलाई?
७.आफ्नो जातीयता र धर्म संस्कृतिको पक्षमा लड्दै गरेको हाम्रो चेलीहरु शिरन ख्युङबो तामाङ, नेरुता मोक्तान तामाङ, माया लोप्चन तामाङ,गुराँस ग्लान तामाङ आदिलाई हेर्नु अनि नविना लामालाई? के फरक छ नविना लामा र शरिन- नेरुता-माया-गुराँसमा। अनि के फरक छ केपी ओली र नविना लामामा ? के कुरामा गर्व गर्ने हाम्रो जनजाति चेलिहरुले त्यो स्थानमा पुग्यो भनेर यदि हाम्रो आवाजहरु शासकहरुले बन्द गर्दा नविना लामा मौनताको जन्जिर भित्र बाँधेर बसिछन् भने ?
हो मैले यही कुराको कारण नविना लामाको विरोध गरेको हु।आफ्नो जातियता, धर्म संस्कृतिको विपक्षमा उभिएको भनेर विरोध गर्दा साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने धम्कि दिने नविना लामा। सक्छौ मुद्दा हालेर देखाउ। जातिया उत्पिडन मुक्तिको लागि फासी चढ्न तयार छु।।
-अनिस तामाङ(काभ्रे तिमाल) हाल दुबई
साउदी पुगेका नवलपरासीका दुई नेपालीको मृत्यु
320 Views नवलपरासी, २६ भदौ । रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नवलपरासीका दुई व्यक्तिको पछिल्लो एक सातामा मृत्यु भएको छ ।
तामाङ सोसाइटी अमेरिकामा बिभाजनको खतरा
198 Views न्यूयोर्क, अमेरिका । तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अाठाैं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष पदको लागि चुनावी माहोल एकाएक गर्माएको छ ।
अध्यक्ष पदमा सोसाइटीका पूर्व महासचिव तथा कराँते प्रशिक्षक शान्ता थोकर र मानार्थ सदस्य तथा चलचित्रकर्मी अमृत लामा दुवैले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
दुवै प्रतिस्पर्धीहरू अा-अाफ्नै तरिकाले चुनावी अभियानमा व्यस्त देखिन्छन् । पछिल्लो समय फेसवुक मेसेन्जर मार्फत चुनावी अभियानलार्इ तिब्रता दिएको पाइन्छ । यही सिलसिलामा अादीवासी जनजाती महासंघ अमेरिका (फिप्नाका) का वर्तमान अध्यक्ष लुइसाङ वाइवाको भनाइ बाहिर अाएको छ ।
उनले एक अनलाइन पोर्टल मार्फत अमृत लामालार्इ विधानतः अयोग्य घोषणा मात्र गरेनन्, एउटा मानार्थ सदस्यको हैसियतले अध्यक्षमा दावी गर्न नैतिकरूपले नमिल्ने समेत बताएका छन्। अध्यक्ष पदमा दावी गर्ने हो भने सोसाइटीले सम्मानार्थ दिएको पदवी फिर्ता गर्नुपर्ने वाइवाको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा अमृत लामासँग बुझ्दा उनको तर्क यस्तो छः तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्ष पदको लागि विधानतः म अयोग्य छु भन्ने लुइसाङ वाइवाको भनाइ सरासर गलत छ किनभने तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको विधानमा अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको योग्यता सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
विगतमा कुनैवेला निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन प्रयोजनको लागि बनाएको निर्देशिकाको अाधारमा मलार्इ अयोग्य ठहरयाउने लुइसाङ वाइवा भनाइ अाधीकारिक होइन । त्यो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत बिचार हो । त्यो पुरानो निर्देशिका यतिखेर काम नलाग्ने अमृतको जीकिर छ ।
नैतिकताकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा बोर्डको जानकारी बिना संस्थाको पैसा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि भोगचलन गर्ने व्यक्तिले अरूलार्इ नैतिकताको पाठ सिकाउन मिल्छ? मलार्इ दिइएको मानार्थ पदवी फिर्ता गर्दैमा मेरो उम्मेदवारी स्वीकार हुन्छ भन्ने लुइसाङ वाइवाको हैसियत सोसाइटीको वर्तमान कार्यसमितीमा के हो?
विगतमा महासचिव पदमा रहँदा पदीय दुरूपयोग गर्दै संस्थाको लेटरप्याड प्रयोग गर्ने र संस्थाको ल्यापटप गायब पार्ने व्यक्ती चाँही अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारको लागि कसरी नैतिक रूपले योग्य भयो?
जो व्यक्ति हिजो तामाङ सोसाइटीको सिफारिसमा फिप्नाको अध्यक्ष भाछ त्यस्तो व्यक्तिलार्इ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने नैतिक अधिकार नभएको अमृत लामाको भनाइ छ ।
अमृतको भनाइनुसार लुइसाङको अभिव्यक्तीले तामाङ सोसाइटीमा एकता नभर्इ बिभाजन ल्याउने खतरा छ । यस्तो गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ती दिने व्यक्तिलार्इ तामाङ सोसाइटीले तुरून्त फिर्ता बोलाउनु पर्दछ ।
अन्यथा संस्थाको प्रतिष्ठामा अाँच अाउन सक्नेछ । विगतमा २०६२।६३ सालतिर नेपाल तामाङ घेदुङ संघलार्इ फुटाएर नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ संघ बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका लुइसाङ वाइवाको नियत यतिखेर सफा नरहेको अमृतको थप भनाइ छ ।
तसर्थ सम्पूर्ण तामाङ दाजुभार्इ तथा दिदीबहिनीहरूमा यसतर्फ सतर्क रहन उनको अनुरोध छ ।
अस्ट्रेलियामा ‘नेपाल डे’ को तयारी
199 Views भाद्र २४, २०७३- गैरआवासीय नेपाली संघ र अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतावासले संयुक्त रूपमा अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक ‘नेपाल डे’ मनाउने भएका छन्। नेपाली पर्यटन, कला संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विदेशीलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले नेपाल डे मनाउन लागिएको हो।
अस्ट्रेलियाको दक्षिणी राज्यको एडिलेडमा सेप्टेम्बरको २४ मा आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रममा जतिसक्दो बढी विदेशीलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिइएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। आफ्नो देशलाई चिनाउन नाम महत्त्वपूर्ण हुने ठानेर आफूहरूले पहिलो पटक ‘नेपाल नेसनल डे’ नाम राखेर पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न लागेको एनआरएन साउथ अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष नवीन कँडेलले बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कला, संस्कृति झल्कने विभिन्न नृत्य प्रस्तुत गरिनुका साथै नेपाली पोसाक, पर्यटनसम्बन्धी विविध जानकारी र नेपालमा घुम्न जानेहरूका लागि सूचना उपलब्ध गराइनेछ।
अवैतनिक वाणिज्यदूत दीपक धमलाले भूकम्पपछि नेपालमा जाने पर्यटकको संख्या कमी आइरहेकाले यहाँका नागरिकलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए।
उनले नेपाल पर्यटकीय क्षेत्रका लागि सुरक्षित र सहज छ भन्ने जानकारी दिन झाँकीसहितका कार्यक्रम र केही भिडियो प्रस्तुतिसमेत गरिने जानकारी दिए। एनआरएन सचिव नवीन पन्तले कार्यक्रममा स्थानीय अस्ट्रेलियाली मन्त्रीहरूका साथै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद र विभिन्न नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको सहभागिता रहने बताए।
कतारको उरेडूबाट नेपालमा फोन गर्न मिनेटको ६ रुपैयाँ मात्रै
313 Views २१ भदौ, काठमाडौं । कतारबाट नेपालमा हुने कल सस्तो भएको छ । उरेडू मोबाइल कम्पनीले नेपालमा हुने कलको दर सस्तो बनाएको हो ।
उरेडूबाट नेपालमा एनटिसी र एनसेल दुबैमा हुने कललाई प्रतिमिनेट २० कतारी दिहीराम अर्थात ६ रुपैयाँमा झारिएको छ ।
(कतारमा १०० दिहीराम =१ रियाल )
यसअघि नेपालमा हुने कल प्रतिमिनेट ९९ दिहीराम अर्थात २९ रुपैयाँ बराबर पथ्र्यो ।
अब उरेडुमार्फत नेपालमा हुने कल २३ रुपैयाँ सस्तो भएको छ । नेपाल की स्किम सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले मूल्य घटाइएको हो ।
यो स्किममा सहभागी हुन चाहानेले ‘एनके’ टाइप गरेर १२१ मा एसएमएस गर्न सकिने छ । अथवा (ह्यास्टि्रक २११ ह्याच ) डायल गर्न सकिने छ । कतामा कार्यरत नेपालीको मागअनुसार कल शुल्क सस्तो बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो स्किममा सहभागी हुनेको मोबाइलबाट हरेब हप्ता एक कतारी रियाल काटिने छ ।
332 Views हरि कृष्ण न्यौपाने(कुवेत)-करिब ७ बर्ष देखी कुवेतलाई कर्मथलो बनाउदै आएकी बुटवलकी रमा गुरुङको आज सेप्टेम्बर ५ तारिक बिहान करिब १:०० बजे तिर कुवेतको जिलिब स्थित आफ्नै कोठामा हृदयघातका कारण मृत्‍यु भएको छ। दलित एकता संजालका कोषाध्यक्ष कृष्ण सुनारले मृत्‍यु हुने रमा गुरुङकै फ्ल्याटमा बस्ने पुर्णिमा गुरुङलाई उध्रित गर्दै तीतोपाटीसंग भने, उनी कुवेतको नासेर स्पोर्टस कम्पनी जिलिबमा सेल्स गर्ल्सको रुपमा काम गर्थिन।सधैं झै मृतक रमा गुरुङ हिजो राति १२ बजे तिर डिउटी सकेर कोठामा फर्कदै गर्दा कोठा नजिकैको किराना पसल(बकाला)मा पानी किनेर पिउने क्रममा त्यही ढलेकी थीईन।त्यही ढलेकी गुरुङलाई किराना पसलमा आएका इजिप्सियनको सहयोगमा उनकै कोठामा लगेर सुताइएको थियो।केही समय पछी कोठामा अरु साथीहरु आउदा रमा मृत अवस्थामा पाए पछी उनका साथिहरुले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे पछी प्रहरीले शबबाहानका साथ घट्नास्थलमा आई उनको शबलाई शब गृहमा लगेको थियो।
प्राप्त जानकारी अनुसार करिब ३५ बर्षिय मृतक रमा गुरुङ भर्खर मात्र ल्यान्डमार्क ग्रुप(म्याक्स)बाट नासेर स्पोर्ट्स कम्पनीमा सरेकी थीइन भने उनलाई दमको समस्या पनि रहेको थियो।
रमा गुरुङको मृत्‍युका बारेमा नेपाली दुताबासका दितिय सचिब भोगेन्द्र लिंङ्देललाई संपर्क गर्दा अहिले सम्म दुताबासमा जानकारी नआएको र आफुहरुले प्राप्त गरेको सुचनाको आधारमा वास्तविकता बुझ्दै गरेको बताए।उनले भने”आज त सबै सरकारी निकाय बन्द भैसक्यो, भोली बिहान सम्ममा कम्पनी, प्रहरी वा सम्बन्धित निकाय सम्म पुगेर सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौ।”
टुर दि पोखराका लागि एनआरएनको चासो बढोस्
220 Views फराकिला सडकहरुमा सरर गुडेका गाडीहरुले मात्र हैन, सुरुङमुनि हुइँकिने मेट्रो ट्रेन र रेन्फेहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मन लोभ्याएको छ । धेरैको मुखबाट सुनिन्छ, हाम्रो देशमा पनि यस्तै व्यवस्था भइदिए ! अझ सडकहरुमा साइकल गुड्ने छुट्टै लेन देख्दा नेपालीहरु झनै चकित पर्छन् । प्राय: युरोपेली मुलुकहरुको यो विकसित रुप देख्दा सबै नेपालीलाई एक पटक सोच्न बाध्य गराइदिन्छ ।
सर्वसुलभ रुपमा जनताको पहुँचमा हुने गरी सरकारले ल्याएको नीतिका कारण युरोपेली मुलुकहरुमा धेरैले साइकल प्रयोग गरेको पाइन्छ । ती मुलुकमा साइकल चढ्नेहरुका लागि व्यवस्थित र सुरक्षित छुट्टै मार्ग मात्र हैन, ठाउँठाउँमा २४ सै घण्टा साइकल उपलब्ध हुने गरी राखिएका स्टेशनहरुले यसको महत्व झनै चुलिएको छ । धुलोधुवाँरहित हुने भएकाले वातावरणमैत्री साइकलको लोकप्रियता युरोपमा बढ्दै गएको छ । यसका साथै साइकल चढ्नेहरु तन्दुरुस्त पनि हुने भएकाले सबै उमेरसमूहले रुचाएको पाइन्छ ।
साइकल चढ्नेलाई हेर्ने मानसिकता
विकसित मुलुकमा जतिसुकै सम्पन्न परिवारको भए पनि साइकल चढेर हिँडेको देख्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले समेत सार्वजनिक रुपमा साइकलमा यात्रा गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ खोक्रा आर्दशका गफ धेरै सुनिए पनि व्यावहारिक रुपमा साइकलको प्रयोग गरिएको पाइँदैन ।
सम्पन्न वर्गले व्यावहारिक र सार्वजनिक रुपमा साइकलमा यात्रा नगरी सौखको रुपमा मात्र चलाउँछन् ।
सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायीदेखि पत्रकारसम्मले साइकललाई खासै यात्राको साथी बनाएको पाइँदैन । पहुँच भएसम्म मोटरसाइकल, स्कुटर तथा महँगा गाडीसम्म रोजाइका साधन बन्ने गरेका छन् । तर, बाध्यताले साइकल चढ्नेहरुको व्यथा भने प्रशस्त पाइन्छ।
नेपाली समाजमा साइकल चढ्नेलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोण छ । साइकल चढ्नेलाई गरिब सोच्ने र आयस्रोत नभएकाले बाध्यताले प्रयोग गरेको भनी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ । एउटा सफल व्यवसायीले साइकलको प्रसंगबाट सुरु गरेर आफ्नो सफलताको कथा सुनाउँछन् । ‘मैले साइकल चढेर पहिले यसो गर्थेँ, उसो गर्थेँ ।’ मानौं साइकल चलाउनु भनेको संघर्ष गर्दाको दुःखिया बेलाको तुच्छ कहानी हो । मानौं सफल बनेपछि साइकल चाहिँदैन । संघर्ष गर्दा हरपलको साथी बन्ने साइकल सम्पन्न बनेपछि त्याग्न लायक ठानिन्छ ।
पहिले साइकल चढेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो भनेर नेपाली समाजमा साइकललाई तुच्छ रुपमा हेरिएको पाइन्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाहरुले मात्र प्रयोग गर्ने साधन भनेर व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
अर्कातिर, नेपालका सडकहरु साइकल गुडाउन सक्ने गरी सुरक्षित पनि छैनन् । ठूला सवारीसाधनले साइकलयात्रीलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । तर, युरोपेली मुलुकमा साइकलयात्रीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै छुट्टै लेनको पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा साइकल लेन त परको कुरा, फुटपाथ समेत अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन । कतिपय ठाउँमा साइकल लेन जस्तो बनाइए पनि जथाभावी पार्किङ गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने र पसलहरुले सामान राखेर अतिक्रमण गरेको पाइन्छ ।
नेपाली समाजमा साइकलले स्थान नपाइरहँदा यसलाई बदल्ने प्रयास नभएका भने होइनन् । साइकल प्रयोगमा जोड दिने अभियानमा लागेका संघसंस्थाहरु भेटिन्छन् । पछिल्लो समय साइकल सिटी पोखराले ‘टुर दि पोखरा’ को अवधारणा ल्याएर सकारात्मक सोच बढाउने प्रयास गरेको छ ।
के हो टुर दि पोखरा ?
विश्वव्यापी रुपमा चर्चित ‘टुर दि फ्रान्स’ बाट प्रभावित भएर गत वर्षदेखि पर्यटकीय नगरी पोखरामा ‘टुर दि पोखरा’ कार्यक्रम थालिएको हो । साइकल सिटी पोखराले स्वास्थ्य, वातावरण र पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर यस वर्ष पनि सो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । गत वर्ष १२ असोज २०७२ मा साइकल र्‍याली निकाल्दै पहिलो पटक ‘टुर दि पोखरा’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि यसको चर्चा चुलिएको थियो ।
यसपटक आँउदो असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४) ‘स्वास्थ्य, वातावरण तथा पर्यटनका लागि साइकल’ भन्ने नाराका साथ टुर दि पोखरा २०१६ आयोजना हुँदै छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न गतिविधि भइरहेको पोखरामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउने आयोजकको लक्ष्य छ ।
स्वस्थ रहन व्यायाम आवश्यक छ, यसको लागि साइक्लिङ उपयुक्त हुने भन्दै गत चेतनामूलक र्‍यालीको आयोजना गरिएको थियो । यस वर्ष पनि वातावरण स्वच्छ राख्न र पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि साइक्लिङ अति उपयुक्त छ भन्ने जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ । यस वर्षको साइकल यात्रा १८ किलोमिटर हुनेछ । पोखराको फेवातालबाट सुरु हुने साइकल यात्रा लेखनाथको बेगनास तालमा पुगेर समापन गरिने कार्यक्रम संयोजक निरज थापाले जनाएका छन् ।
सबै उमेरसमूहका लागि साइकल निकै उपयुक्त साधन रहेकाले सबै क्षेत्र, पेशाका व्यक्तिहरुका साथै सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहने आयोजकको अपेक्षा छ ।
साइकल सिटी कस्तो संस्था हो ?
विकसित राष्ट्रहरुको बढ्दो औद्योगीकरण, शहरीकरण र बढ्दो सवारी चापका कारण कार्बन उत्सर्जनका कारण वातावरण विनाश भई पृथ्वीको तापमान बढिरहेको अवस्था छ । त्यसैले बढ्दो सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्दै साइकल प्रयोगलाई सकेसम्म बढाउँदै यसको महत्वबारे प्रचार गरी प्रदुषण हटाउन टेवा दिने र जलवायु परिवर्तन रोकथाममा थोरै भए पनि योगदान पुगोस् भन्दै साइकल सिटीको स्थापना गरिएको संस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा प्रकाश पारेको छ ।
यस संस्थाले नेपालका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरु सिरुबारी, पञ्चासे, सिकलेस, रारा, मुक्तिनाथ, अन्नपूर्ण राउण्ड, मिलिनियम, लुम्बिनी जस्ता ठाउँ साइकल मार्फत पुगेर तिनको प्रचारप्रसार गर्ने पनि उद्देश्य बोकेको छ । साइकलमैत्री पर्यटकीय शहरको अवधारणा समेत यसले ल्याएको छ । जस अन्तर्गत पोखरामा शान्ति स्तुपादेखि रानीवनको बाटोमा साइकल ट्रयाक खोल्ने र पोखराका सबै पर्यटकीय गन्तव्यमा साइकल स्ट्याण्ड निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्ने उद्देश्य संस्थाले राख्दै आएको जनाएको छ ।
टुर दि पोखरा आयोजना गर्न खर्च कति ?
आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा साढे ११ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । खासगरी साइकल यात्राको क्रममा प्रयोग हुने ज्याकेटले खर्चको मुख्य हिस्सा ओगटेको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी यसैमा खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ । अन्य खर्च स्टेज सजावट, ब्यानर, प्रचारप्रसार, पानी, औषधि, प्रेस मिट लगायत पूर्वतयारीमा लाग्ने जनाइएको छ ।
सहयोगदाता तथा प्रायोजकहरुबाट रकम संकलन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्थाले यस वर्षदेखि गैरआवासीय नेपालीहरुसँग सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एनआरएन तथा प्रवासको नेपाली समुदायबाट सुझाव तथा आर्थिक सहयोगको समेत अपेक्षा राख्दै साइकल सिटीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई युरोप पठाएको छ ।
एनआरएनसँग सम्बन्ध प्रगाढको प्रयास
विदेशको विकास देखेर आफ्नो देश सम्झने प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो मुलुकमा साइकलमैत्री वातावरण बनाउन जुटेका युवाहरुलाई साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि साइकल सिटी पोखराले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि संस्थाकी कोषाध्यक्ष करुणा ढकाल हाल युरोप यात्रामा छिन् । टुर दि पोखराको बारेमा बुझाउँदै नेपाली समुदायलाई सहयोगको अपिल समेत गरेकी छन्।
उनले युरोपस्थित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुसँग भेटवार्ता गर्दै छिन् । नेपाली दूतावासहरुदेखि पर्यटन दूतहरुलाई यस अभियानबारे जानकारी दिने क्रम पनि जारी छ । बुधबार डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासमा ढकालले कार्यवाहक राजदूत रामकाजी खड्का, पर्यटन दूत सोम सापकोटासँग भेटिन् । यस्तै, स्विटजरल्याण्डमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया हुने भएको छ ।
परिवर्तनको सोचका साथ आयोजना गरिएको ‘टुर दि पोखरा’ पोखरेलीहरुको मात्र नभई सबै नेपालीको कार्यक्रम हो । अत: यस्ता कार्यक्रमलाई गैरआवासीय नेपाली संघका साथै सबै प्रवासीहरुले साथ र सहयोग दिनु जरुरी छ । ‘टुर दि पोखरा’ सफल बन्दै आगामी दिनमा अझ फैलिँदै ‘टुर दि नेपाल’ कै रुप लिन सकोस् । शुभकामना !
त्यसपछि हामी ४ जना नेपालीलाई निर्घात पिट्यो… साउदीमा मालिक र प्रहरी मिलेर नेपाली कामदार कुटपिट
2,038 Views भाद्र १७, २०७३- तीन महिना गाडीको इन्जिन बिग्रिएको घटनालाई लिएर साउदी अरबमा गाडी मालिक र प्रहरी मिलेर चार जना नेपालीलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् ।
साउदी अरबको दमामस्थित ‘हमाद जे अल अजमी जेनरल कन्ट्रयाक्टिङ’मा कार्यरत ती ड्राइभरहरुलाई मालिकले आफ्नो घर नजिकै प्रहरी बोलाई कुटपिट गरेका हुन् ।
मालिकले नै उनीहरुलाई खाना समेत नदिई बन्धक बनाएर राखेका छन् । पीडितले आफूहरुलाई उद्धार गर्न नेपाली दूतावासलाई अनुरोध गरिसकेका छन् । पीडितको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत उद्धारको लागि निवेदन दिइएको छ ।
पीडित मध्ये बुटवलका ४० वर्षीय हस्तलाल केसीले आफूहरुमाथि भएको अन्याय यसरी सुनाए ।
‘म साउदी अरबमा आएको २९ महिना हुँदैछ । हामी हाल १८ जना नेपाली कार्यरत छौं । कम्पनीले ड्राइभर र गाडी सहित विभिन्न कम्पनीमा सप्लाईमा पठाउने गरेको थियो । हामी दमामको मदिना भन्ने ठाँउमा काम गर्थ्यौं । बाँकी साथीहरु रियाद, जिजान (यमनको बोर्डर)मा काम गर्छन् ।
तीन महिनाको अघिको कुरा हो । इदको बेला गाडी पार्किङ गरेर क्याम्पमा आएका थियौं । हामीले पार्किङ गर्ने ठाँउमा डेढसय भन्दा बढी गाडी पार्किङ गरेर राख्ने गर्छौं । त्यहाँबाट ५०० सय मिटरको दुरीमा हामी बस्छौ । जहाँ ५ सयभन्दा बढी कामदार बस्ने गरेका थियौं । त्यस बेला सहकर्मी जयलाल यादवले चलाउने गाडीको इन्जिनमा कसैले चिनी हालिदिएछ । त्यसपछि गाडीको इन्जिन नै जल्यो । काम लागेन । कम्पनीले छानबिन गर्‍यो केही पत्ता लगाएन ।
मेरो गएको जुलाई २५ तारिख नेपाल फर्किने समय थियो । नेपालीले छाडेर यही कम्पनीमा नफर्किने भएकोले मलाई पनि जना दिइरहेको थिएन । जानेहरुलाई ३५ सय रियाल धरौटी राखेर मात्रै पठाउँथे । गत हप्ता छानबिनको लागि भन्दै मदिनाबाट दमाम बोलायो । त्यसपछि हामीलाई दमामको हापुक सिटी नजिकै उदलिया भन्ने स्थानमा ल्याएर राख्यो । यो मालिक बस्ने घर नजिकै हो ।
मालिकले हामी बसिरहेको ठाउँमा चिनेको प्रहरीलाई लिएर आयो । कोठामा मोरङका २८ वर्षीय हिक्मत श्रेष्ठ, पाल्पाका २८ वर्षीय नारयणमल्ल ठकुरी, प्युठानका २८ वर्षीय हिमाल मगर र एक पाकिस्तानी थियो । पाकिस्तानीलाई थोरै हिर्काएर साइड लगायो । मालिकले पाकिस्तानीलाई धेरै पिट्यो भने अरु पाकिस्तानीले बबाल गर्छ भन्दै थप पिटेन । त्यसलाई हामी चार जनालाई भने निर्घात पिट्यो । म सहित सबै साथीहरुको जिऊमा डामैडाम छ ।
त्यसपछि हाम्रो लाइसेन्स, अकामा (परिचयपत्र), मेडिकल कार्ड सबै खोसेर लिएर गयो । मालिकले एक जनालाई जिम्मेवारी लिन भनेर सात दिनको समय दिएको छ । ५ दिन बितिसकेको छ । दुई दिन अब बाँकी छ । जिम्मेवारी नलिए फेरी प्रहरी बोलाएर ल्याउने र केही मुद्दा लगाएर जेल पठाउने धम्की दिएको छ । हामीले दमाममा रहेको दूतावासका प्रतिनिधि हरिप्रसाद घिमिरेलाई पनि आएर उद्धार गर्न भनेको छु । उहाँले मालिकसँग कुरा भइरहेको जनाउँदै हामीलाई राखेको ठाउँमै आउने भनिराख्नुभएको छ ।
हामी चाहन्छौं कि हामी माथि थप कुटपिट नहोस् । सकुशल उद्धार भएर स्वदेश फिर्ने वातावरण बनोस् । बाँकी साथीहरु पनि नेपाल फिर्ता हुन चाहिरहेका छन् ।